Ogaden News Agency (ONA) – Go’aamadii Shirwaynihii 5aad ee OYSU N. America 2015
Go’aamadii Shirwaynihii 5aad ee OYSU N. America 2015
Go’aamadii Shirwaynihii OYSU ee Qaarada N. America
Waxaa Sadexdii Bari ee lasoo dhaafay gobalka Washington Caasimada Seattle ka socday shirwaynihii 5aad ee ururka OYSU Qaarada North America. Shirkan oo ahaa heer Qaaradeed kaas oo la qabto sanad walba xiligan oo kale ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubnaha ururka ee Qaarada Waqooyiga America heerar Deegaan iyo dalba, xubno ka kala socday Jaaliyadaha Ogaadeeniya, iyo Marti sharaf kale. Shirwaynaha oo si toos ah u socday bishan 23-25 keedii ayaa wuxuu Maalinimadii Sabtida, kusoo gabagaboobay guul wax ku ool-ah. Shirwaynaha oo bilowday maalinimadii khamiista, ayaa wuxuu sadexdii maalmood ee ugu horeeyay albaabadu u xidhnaayeen xubnaha ururka iyo Masuuliyiinta heerar deegaan/Dal, iyadoo Habeenimadii Sabtidana shir bulshada qaybaheeda kala duwan lagu casuumay uu kusoo xidhmay. Hadaba, Go’aamadii iyo qodabadii kasoo baxay shirka ayaa la filayaa in dhamaan OYSU-North America faracyadiisa kala duwani ku hawlgalidoonaan si habsami ah.
Qodobadaas ayaa waxaa ka mid ahaa:-
Kadib markii la qiimeeyay warbixinadii ururhoosaadyada iyo waxqabadkii guud ee ururka OYSU ee heer Deegaan iyo heer Dalba, waxaa la isku waafaqay in dhamaan qorshayaashii ururku ay u fuleen sidii loogu talo galay Mudadii u dhaxaysay labada Shir.
Waxaa shirka lagu dajiyay laguna ansixiyay qorsho sanadeedka Qaarada N. America ku talaabsan doonto xiliga dhow ee fooda inagu soo haya.
1-In lasii xoojiyo dhinacyada kala duwan ee arimaha abaabulka (Advocacy) iyo xuquuqul insaanka, oo la isku afgartay in waxbadan uu ururku ka qabtay mudadii uu hawl galayay.
2-Waxaa kale oo la ansixiyay in ururku dadaalkiisa waxqabad sii laban-laabo, waxna laga qabto baahida caruurta agoonta ah ee qaxoontiyada ku tabaalaysan, iyadoo halkaas lagu magacaabay Gudi u xilsaaran soo indho-indhaynta dhankasta oo lagu dabooli karo baahida agoonta.
3-Xoojinta iyo adkeynta midnimada ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogaadeeniya (OYSU) guud ahaan, Gaar ahaana Qaarada North America, taas oo ay ka dhalatay in la ansixiyo Gudi Abaabusha ururhoosaadyada, carbisana maskaxda iyo muruqa xubnaha ururka ee heer Qaaradeed ilaa heer Deegaan iyo Dal.
4-In kor loo qaado aqoonta dhalinyarada u dhalatay Ogaadeeniya, laguna baraarujiyo gumaysiga madow, ee sababay tacadiyada, iyo xadgudub yada ka dhan ka’ah xuquuqul insaanka, ee sida joogta’ah uga dhaca wadanka Ogaadeeniya.
5-Taageerida, Xoojinta iyo garab istaaga halganka xaqa ah ee umada Soomaalida Ogaadeeniya ugu jirto helida xornimo buuxda, kaas oo ay hogaaminayso Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya (JWXO).
Ururka OYSU ee Qaarada North America wuxuu ugu baaqayaa dhamaan bulsho waynta reer Ogaadeeniya in taageero buuxda oo hiil iyo hooba ay la garab istaagaan halganka xaqa ah ee loogu jiro in lagu soo dhiciyo xaqa shacabka Ogaadeeniya ee ay hogaaminayso Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya (JWXO), una midoobaan iska caabinta gumaysiga madow ee Itoobiya, kaas oo shacabka reer Ogaadeeniya u gaystay xadgudubyo aan lasoo koobi karin, sida kufsiga, xidhayga, dhaca, jidhdilka, Midab takoorka IWM. Sidoo kale wuxuu shirku ugu baaqayaa dhamaan dhalinyarada reer Ogaadeeniya meelkasta oo ay aduunka joogaan inay u hiiliyaan umada tabaalaysan ee reer Ogaadeeniya, maadaama ay dhalinyaradu tahay codka, cududa iyo caqliga bulshada.
Ururka OYSU Qaarada Waqooyiga America wuxuu cambaareynayaa xadgudubyada iyo falalka foosha xun ee ka dhanka’ah xuquuqul insaanka iyo sharciyada caalamka ee uu gumaysiga Itoobiya kula kacay shacabka dulman ee reer Ogaadeeniya. Waxaa kale oo aan cambaareynaynaa inta ku faraxsan iyo inta gacan ku siinaysa dulmigaas ay gumaysiga Itoobiya ugaysanayso shacabka Ogaadeeniya iyaga oo fulinaya rabitaanka gumeysiga madow ama la dhacsan.
Midnimo, Mintid, Isku tashi, Guul,
Shirwaynihii 5aad ee OYSU-North America,